10 mamirapiratra fanitsiana dia tokony handinika Apple ho an'ny iPhone 7 - News Fitsipika
10 mamirapiratra fanitsiana dia tokony handinika Apple ho an'ny iPhone 7
A Wireless mamaly ny endri-javatra izay manome finday amin'ny latsaky ny 20% Herin'ny tosika kely, rehefa mitoraka hamely ny manda - tonga lafatra ho an'ireo amin'ny fahatezerana olana!
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “10 mamirapiratra fanitsiana dia tokony handinika Apple ho an'ny iPhone 7” dia nosoratan'i Thomas Batten, fa theguardian.com ny zoma 8 Janoary 2016 16.41 UTC
Ity herinandro ity, tsaho fa Apple, amin'ny neverending fikatsahana ho sleeker finday, dia ditching ny faneva 3.5mm headphone Jack ao amin'ny atsy ho atsy iPhone 7 efa naniraka ny sasany mpampiasa ho toy ny lasa adala. Very ao amin'ny fotsy feo ny écouteur Buzz, na izany aza, dia maro ny hafa marani-tsaina mitovy tsaho fanitsiana sy fanatsarana ho an'ny iPhone.
Nitombo ny fiainana bateria dia tokony hanao izany azo atao ho an'ny iPhone 7 mpampiasa mba hahatonga olona maro araka izay antso roa eo amin'ny fiampangana, ary iray nandrasana hatry ny ela Wireless mamaly ny endri-javatra dia hanome finday amin'ny latsaky ny 20% Herin'ny tosika kely, rehefa mitoraka hamely ny rindrina.
Ny iPhone 7 ny lamba no toa nisy grady ka izany dia tsy manorotoro raha kely tratran'ny tsio-drivotra, Na dia ireo mpitoraka blaogy dia mizarazara ny fomba tsara ny vaovao dia hanao efijery hamely gusts.
A nohavaozina tanteraka hitondra fakan-tsary vaovao naorina-in, Instagram-ara-tsindrimandry sivana, toy ny iray Mitarika tsikelikely mankany mpampiasa ny mampiaraka fampiharana toy ny Tinder izay manalefaka ny famoizam-po eo amin'ny mpampiasa 'maso rehefa hanaikitra selfies.
Misy mino fa loharanom-baovao Apple dia mikasa ny hahaliana ny valahana audiophiles amin'ny alalan'ny famotsorana ny fanontana voafetra dika mitovy iray ny iPhone 7 amin'ny vinyl. Ry malala American mpandraharaha Martin Shkreli dia tsaho mba ho liana amin'ny mividy azy io.
The iPhone 7 miampy dia manasongadina ny vaovao mampitohy miafina naorina eo an-indray ny fitaovana ampy hihazona lehibe telo fonosana ny Taco Bell Fire saosy, na ny fonosana handeha hamidy misaraka, teknolojia Insiders hita.
Vohikala maro no manolo-kevitra hisy fanatsarana ny Siri vaovao ny rafitra fandidiana izay mampiditra be pitsiny kokoa feo fankasitrahana teknolojia mba Siri dia ho afaka ny hahafantatra, saingy efa ho fandrahonana sy hanitsiana azy feo tokony miraharaha ny iray amin'ireo wheedling ingratiation.
A tanteraka retooled Apple Maps dia hanampy ireo mpampiasa tsy lalana izay hitondra azy ireo amin'ny akaiky ny faritra izay mihoatra ny roa Donald Trump avowed mpanohana efa nanangona.
Mahagaga, efa voalazan'ny fa raha nataony iPhone roa 7s ao anaty boaty miaraka nandritra ny alina ka nametraka azy hilalao iray Al Green Indrindra Hits, ianao mandray ny iPhone 7S momba ny sivy volana tatỳ aoriana.
Mba hahaliana ny Arivo Taona mpampiasa, iMessage efa anarana "tsara ianao, ianao irery no mahazo azy ary ianao izany, tena marina. "
Angamba tena excitingly, dia efa nanamafy fa rehetra fa isaky ny iPhone 7 ho avy amin'ny tanana taratasy avy iray amin'ireo Shinoa kamboty izay nanamboatra ny fitaovana, manamarina fa izy ireo nankafy fanaovana izany Ary nahoana ianao no tsy matahotra na mahatsiaro ho tsy meloka.
23003	2 Paoma, Article, Computing, Toetoetra, Instagram, iPhone, Finday, Smartphone, Teknolojia, Thomas Batten
← Alzheimer fitsaboana akaiky kokoa toy ny atidoha mamaivay aseho ho manan-danja Oculus Mitsefaka: Ny zava-misy virtoaly Facebook headset eto →